Codsiga loo yaqaan 'Gear S2' ee loogu talagalay iPhone-ka wuxuu ku sii daayaa shabakadda | Wararka IPhone
Gear S2 iPhone app ayaa si qarsoodi ah uga digaya khadka tooska ah
Waxaan inbadan kahadalnay waqtiyadii lasoo dhaafay Gear S2, saacada ay Samsung damacsantahay inay kaqaado Apple usha saacadaha casriga ah ee hada ay leedahay Apple Watch 2. Laakiin si looyaqaano Gear S2, wax waa in marka hore dhacaan, daboolaa tirada ugu badan ee isticmaaleyaasha suurtogalka ah. Waa run in Android ay leedahay tiro badan oo isticmaaleyaal ah, runtiina iyagu waa aqlabiyad badan, hase yeeshe, aqlabiyadda aqlabiyaddu waa adeegsadeyaal dhexdhexaad ama dhexdhexaad hoose ah oo iyagu dan yar ama dan kama lihi inay lacag dheeraad ah ku qaataan gashadaan sida ay tahay. saacadda smart. Sidaas darteed, Samsung waxay isha ku haysaa dadka isticmaala macruufka, waxay ku dhawaaqday in Gear S2 uu la jaan qaadi karo iPhone-ka isla markaana bidhaamaysa ayaa bilaabeysa in la arko.
Wax walba waxay muujiyeen in codsigan lagu sameynayo Gear S2 la jaan qaada iOS uu imaan doono bisha Maarso, sikastaba waxaan horey ujoognay bartamihii Abriil walina lama siinin. Laakiin sida laga soo xigtay warbixinnadii ugu dambeeyay, nooca .ipa (Kordhinta faylka barnaamijka iOS) ayaa durba ku qulqulaya shabakada. Si kastaba ha noqotee, macruufka 'iOS' waa hawl aad u adag in lagu rakibo feylashaan aan la saxiixin, kaliya isticmaalayaasha leh Jailbreak ayaa leh suurtagalnimada ugu yar, sidaas darteed waa wax aan faa'iido lahayn. Waxaan u maleyneynaa in Apple ay carqalado halis ah gelinayso App Store si ay u bilowdo arjiga Gear S2.
Waxaa macquul ah imaanshahooda App Store inay dhowdahay, ama maya. In kasta oo ra'yigayga daacadda ahi uu yahay in Gear S2 wax yar ama aan waxba laga qaban ku haynin barnaamijka IOS. In kasta oo saacaddu aad u qurux badan tahay, marka Kaysar la leeyahay waxa Kaysar ka socda, shaqooyinka jawaabta iyo iswaafajinta watchOS ee macruufka ayaa si ballaadhan uga sarreyn doona kuwa Gear S2, haddana iyada oo aan la dhihin waan ognahay in Apple uu sameyn doono wax kasta dadaal si loo yareeyo astaamaha Gear S2 ee ku yaal iPhone.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Gear S2 iPhone app ayaa si qarsoodi ah uga digaya khadka tooska ah
Waxay hubaan inay iyagu sifeeyeen iyaga hahahahahaha
Waxaan ku rakibay barnaamijka GEAR S2 taleefankayga Iphone 6s iyo si fiican, waa run oo WhatsApp lama soo celin karo shaqooyin kalena way naafo yihiin, laakiin waxa ugu weyn ayaa ah in barnaamijka NIKE GPS ee ku soo dhacay Gear S2 la raray !!
Wax talo bixin ah oo ku saabsan sida dib loogu soo celiyo? Waxay ahayd mid ka mid ah awoodaha ay Samsung ku leedahay sheegashada sheegashada ciyaartooyda imikana waa lay xidhay anigoo isku dayaya in iPhone-ka la waafajiyo. I caawi!!…
Jawaab JOSE JOAQUIN ORTUÑO GUMBAU
Codsiga canabka wuxuu ku darayaa badhan cusub oo noo ogolaanaya inaan aragno dhamaan waxyaabaha uu ka kooban yahay isticmaale
Mac Otakara wuxuu xaqiijinayaa in iPhone 7 uusan yeelan doonin deked 3.5mm oo uu yeelan doono Smart Connector